29 Jun, 2020 - 00:06	 2020-06-29T03:18:51+00:00 2020-06-29T00:03:55+00:00 0 Views
Kambani iyi yakadzikisa huwandu hwemabanana ainotengesa kubva pamatani 40 svondo rimwe chete kuenda pamatani ari pasi pegumi.
Musika wemabanana unonzi wakanganiswawo nekudzikira kuri kuita mitengo yechirimwa ichi sezvo vatengi vasina mari pari zvino.
VaMadewekunze vanoti mwedzi waKurume usati wasvika, vaitenga mabanana kubva kuvarimi ne$6,30 pakg asi iye zvino mitengo yadzika kuenda pa$4 pakg.
“Sezvo kambani iyi isingakwanise kutenga mabanana akawanda sezvayaiita kare, tave kuenda nawo kumisika inotengeswa muriwo sekwaMutare kana kuMbare, kuHarare.
“Asi mitengo yacho haifadze, kunyanya kana tichitarisa kudhura kwezvekufambisa.
“Mitengo yezvatinoshandisa pakurima iri kukwirawo pasina kumira. Kutengesa kana kuregedza, tinofanirwa kuisa feteraiza miti yemibanana iyi.
“Izvi zvinodhura uye zvinhu zvatisingakwanise kunzvenga,” vanodaro.